मिडिया सिध्याउने, कि चाला सुधार्ने ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
मिडिया सिध्याउने, कि चाला सुधार्ने ?
२०७५ चैत्र २५ गते सोमवार
लामो समय पत्रकारिता गरिसेका गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री छन् । झण्डावाला गाडी पाएपछि उनले आजकाल पत्रकार र नेपाली पत्रकारितालाई दैजिकजसो कतै न कतै आलोचना गरेकै देखिन्छ । कहिले काहीँ त, मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रालयमै बोलाएर पत्रकारिता पढाउन पनि थाल्छन् । यस्तो दृश्य देख्दा लाग्छ, पूर्बपत्रकारले : नेपाली पत्रकरिता र पत्रकार हेपिरहेका छन् । बास्कोटाले भने झै, भात खाउ, कि थाल खाउ उनैलाई हुन्छ ।
सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको, यो अबस्थामा सञ्चार माध्यमले पक्कै पनि सरकारको आलोचना गर्ने नै भए । सञ्चार माध्यमले बनाउटी नभएर, जनताकै आवाज बोलिरहेका हुन्छन् तरपनि मन्त्री बास्कोटालाई सरकारको पक्षमै बोल्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दोरहेछ । नेपाली जमातले बुझे अनुसार मन्त्री बास्कोटा पत्रकार हुदापनि कहिलै स्वतन्त्र पत्रकारिता गरेनन् । उनीले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीकै प्रचारकको भुमिका निभाए । बिगतमा उनी पार्टीको प्रचार बिभाग र मुखपत्र चलाएर बस्दा, पनि स्वतन्त्र पत्रकारिता र जनातको आवाज बुझेनन् । बुझे त केबल कार्यक्रताका भाबना र प्रतिपक्षको आलोचना । सुचना प्रवाहको तवरले पनि सरकार संग प्रभाबकारी संयन्त्र देखिएन ।
अर्को प्रश्न : प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा चाहिने निर्देशन पठाए पश्चात नेपाल मिडिया सोसाइटी र नेपाली दैनिक पत्रिकाले यसलाई मिडिया सिध्याउने खेल, पत्रकारितामा अंकुश, व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् आदि आरोप लगाएका छन् । सरकारले राम्रा काम गरोस । आम सञ्चार माध्यमले आफ्नो भुमिका निभाउने कुरामा चिन्ता नगरोस् ।